China Cassina alu.isihlalo sokudlela(Poly-wood) Manufacture and Factory |I-Tailong
Cassina alu.isihlalo sokudlela(Poly-wood)
Izihlalo zokudlela zakhiwe ngohlaka lwe-aluminium olulula, oluklanyelwe ukumelana nokugqwala futhi luhlale isikhathi eside.Nikeza ngesakhiwo esingasindi kodwa esizinzile kanye nomhlobiso wayo we-poly-wood armrest ulethe kangcono ubukhazikhazi bendawo yokuhlala.
YAKHA UKUZE UDUDUZE
Isihlalo sakhiwe ngokunethezeka engqondweni, isihlalo esithokomele kanye ne-back cushion kunikeza umuzwa omuhle kakhulu wokuhlala nokusekelwa ngemuva.Bopha izinsimbi kukhava yomcamelo ukuze unamathisele ku-backrest ngokuphephile nge-Velcro tape.
YAKHA UKWENZA OKUSEBENZA
Imilenze yesitulo ifakwe amakepisi ezinyawo zepulasitiki ukuvikela iphansi kusuka e-scuffs kanye ne-scrapes kanye ne-exude elegance kanye yinkimbinkimbi.Izihlalo zingapakishwa kalula ukuze zigcinwe lapho zingasetshenziswa.
Isihlalo sokudlela seCassina
* Dlula i-SGS TEST ngo-2020.
I-Cassina Dining Set Display
Indawo yesithombe: Guangzhou,China Isikhathi sokuthatha izithombe: Sept.2019
Cassina alu.itafula lesikwele
Okwedlule: Parma alu.ibha isihlalo
Olandelayo: Cassina alu.itafula elingunxande
Isihlalo sokudlela se-aluminium saseDa Vinci
Luna alu.isihlalo sokudlela
Isihlalo sokudlela sentambo saseBelgium
Parma alu.ibha isihlalo
Da Vinci aluminium bar staol